တော်တို့ရွာက မှန်တာပြောရင် ရိုက်တယ်တော့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တော်တို့ရွာက မှန်တာပြောရင် ရိုက်တယ်တော့…
တော်တို့ရွာက မှန်တာပြောရင် ရိုက်တယ်တော့…
Posted by panpan on Jul 18, 2011 in Creative Writing, Short Story | 21 comments
ဆရာကြီးအောင်သင်း မြောက်ဥက္ကလာပ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ပြောသွားတာလေးပါ
အဲဒီရွာက သူကြီးကအရူးမကိုဘာလုပ်လိုက်တယ်မသိ၊ အရူးမ ဗိုက်ကြီးပါလေရော..
ဒါနဲ့ သူကြီးတပည့်တွေက အရူးမကိုမေးသပေ့ါ၊ ဘယ်သူနဲ့ ရတာလဲလို့
အရူးမက သူကြီးနဲ့ရတာပါလို့ ဖြေတယ်၊ အရူးမကို ၀ိုင်းရိုက်ကြတယ်တဲ့
နောက်တခေါက် ထပ်မေးပြန်ရောတဲ့၊ ဘယ်သူနဲ့ရတာလဲဆိုတော့
အရူးမက မဖြေဘူးတော်တဲ့၊ ဘာလို့မဖြေတာလဲ ပြန်မေးတော့…. တော်တို့ရွာက မှန်တာပြောရင် ရိုက်တယ်တော့ တဲ့…။
တခြားမှာမှန်တာပြောရင် အရိုက်ခံရမှာစိုးလို့ ကျွန်မကတော့ ဒီရွာ(MGရွာ)မှာပဲ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ မှန်တာလေးတွေပြောနေတာ…..။
ဘယ်ရွာက ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီရွာက မှန်တာပြောရင် မရိုက်ဘူး..။ သူကြီးကလည်း သဘောကောင်းတယ် (ဖားတာ) …။ ရွာကလူတွေကလည်း စိတ်ရင်းကောင်းတယ်…. (မြှောက်တာ) ။ ဘာပဲပြောပြော ဒီရွာလေးကိုတော့ချစ်တယ်..။ ရင်းနှီးတယ်…။ နွေးထွေးတယ်..။ (ဒါက ကြော်ငြာ)
ဒီရွာက မှန်တာပြောလျှင် မရိုက်တတ်ဘူး .. သေနတ်နဲ့ပဲ ပစ်တတ်တာ ပန်ပန်ရဲ့ … ။
(လေသေနတ်နဲ့လေ ဟီးဟီး )
အဲဒီလေသေနတ်ကြီးက ပိုကြောက်ရတယ် ဟီးဟီး
လေသနတ် ဒဏ်က သိပ်မဆိုးပါဘူး ပန်ပန်ရဲ့ တစ်ခါပစ် တစ်လံလောက်လေး ပါ
ပန်ပန်ရော လေသနတ်နဲ့ အပစ်ခံရဘူးလား အပစ်မခံဘူးရင် စမ်းကြည့်ပါလားဟင်
ကမ္ဘာပျက်ရင်တောင် မီးကြောင့် ရေကြောင့်ဆို ဗြဟ္မာဘုံအကုန်မပျက်ဘူး
အဲဒိအရူးမက ဘယ်သူပါလ်ိမ့် …။ သူကြီးက ဘာလုပ်လိုက်သည့်မသိ ဆိုတော့ တော်တော် စဉ်းစားနေရသည်…..။ သူကြီးရေ…. ဘယ်သူ့ ဘာလုပ်လိုက်သလဲ ရှင်းရှင်း ၀န်ခံပါ…။ ၀ီကီလိခ် ထဲ ပါသွားမယ်နော်…………..
ဟုတ်ကဲ့ ။ မပန်ပန် ပြောတဲ့ဟာလေး ကျွန်တော်လဲနားထောင်ဖူးပါတယ် တော်တော်ကောင်းတဲ့ စကားတွေပါ။
မသိတဲ့ရွာသားများကို နားထောင်လို့ရအောင် ဒီနေရာကနေပဲ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီမှာဒေါင်းလို့ရပါတယ်ဗျာ ။ myanmaritman ကတွေတာပါ။ မူးရင်းကတော့ ကိုသိန်းဝင်းပါတဲ့။
တရားဝင် နှုတ်ဆက်သွားသူတွေကတော့ ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိ .. ထင်ထားတာကတော့ .. ၀ိုင်းရိုက်ကြလို့ မဟုတ်ဘူးလို့ …
ဒါတောင် မနောဖြူလေးက နှုတ်ဆက် ကဗျာ ရေးလိုက်လို့ အတည်ထင်ပြီး ၀ိုင်း ၀မ်းနည်းနေကြတယ်
အင်းပါ နောက်ကို ရေးတော့ဝူးနော်။ အဲလိုခွဲခွာရမယ်ဆိုရင် မနောလည်း နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ စိတ်ထားလေးတွေ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပြီး မှားမှားမှန်မှန် နားလည်မှုတွေပေးတယ်လို့လည်း ယူဆမိနေလို့လေ… ပြီးတော့မောင်နှမတွေကိုလည်း ခင်မင်မပျက်ပါပဲ။
ဒီရွာက မရိုက်တတ်ပါဘူး။ သတိတော့ထား ကျည်မရှိတဲ့ပြောင်းရှည်တော့ရှိတယ် အဟိ။
ပန်ပန် ရေအရမ်းကောင်းတာပဲ အခုသူများရေတဲစာတွေဖက်တဲ အဆင်ပဲရှိသေးတယ် ရေးတဲအဆင့်မေ၇ာက်သေးဘူး
သူကြီးတပည်. ကိုပုလည်း ပါမယ်ထင်တယ်
ကိုပု ထွက်ခဲ.စမ်း ၀န်ခံလိုက်စမ်းပါ
ဟဲ့ ဟဲ့ ဒီရွာမှာတော့ အရူးမ မရှိလောက်ပါဘူး။ ရွာထဲ အရူးမ ၀င်လာရင်တော့ သတိထားပေတော့ သူကြီးရေ။
ဆရာကြီးအောင်သင်း မြောက်ဥက္ကလာပ စာပေဟောပြောပွဲမှာ ပြောသွားတာလေးပါ)==ဆို့လို့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အဲဒိ စာပေဟောပြောပွဲ mp3 လေးရလို့ အခုနားထောင်နေတယ်..။ ဆရာချစ်ဦးညိုရယ်..။ အကြည်တော်ရယ် ပါတယ် မဟုတ်လား…..?
ဆရာချစ်ဦးညိုရယ်၊ အကြည်တော်ရယ် ပါပါတယ်
နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ ဦးစားပေးဟောပြောသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်
သဂျီးပြောတာတော့ သူဘာမှမလုပ်ဘူး၊ အရူးမက လုပ်သွားတာတဲ့။ ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ မင်းကလည်းကွာဆိုပြီး မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ကြည့်လို့ သူ့နှစ်လုံးပြူးကြီးမထုတ်ခင် ထွက်ပြေးလာရတယ်..။
မကြောက်နဲ. ကိုကြောင်ကြီး သူ.နှလုံးပြူး
ညကမှ သူကြီးကတော် ဂျီးဆေးပြီး သိမ်းထားတာ
ဒီကနေ့ ရွာထဲ ၀င်ကြည့်မိပါတယ် .. တို့ comment တွေ နီထားလိုက်တာ လွန်ပါရောလား .. ရေးထားတဲ့ အကြောင်းကလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ဖူးထင်တယ် ..
ကျွန်မcommentတွေမှာ နီမနေပေမယ့် တခြားလူတွေ comment တွေမှာ နီနေတာတွေတွေ့ရတယ် (ဒေါက်တာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး)
အနီတရားခံဘယ်သူလဲမသိပေမယ့် ရှိနေတာတော့ သေချာတယ် …
လက်သီးပုန်းပေါ့ … ပေါ်တင်ကွန်မန့်မရေးရဲလို့ လိုက်နီနေတာမို့လို့ စိတ်ထဲမှာ မထားပါနဲ့ဒေါက်တာ …